हामी बिश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुकुट बनाउँदै छौंः अर्जुन महर्जन | OnlineChautari.com
हामी बिश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुकुट बनाउँदै छौंः अर्जुन महर्जन
March 26, 2016 | 2:31 pm
काठमाडौं । पाटनको त्यागल (लुहिटि)मा जन्मिएका एक कुशल कालिगढ अर्जुन महर्जन एक सफल व्यापारी पनि हुन् । हाल उनी व्लुवर्ड महलमा संञ्चालित मुड्स रेष्टुरेन्ट एण्ड ब्यांक्वेटका संञ्चालक हुन् । उनले नेपाल भाषाको चलचित्र वमिसाःको निर्माण गरेर चलचित्र क्षेत्रमा पनि हात हालेका छन् । हाल उनी गोदावरीमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो (४०/५० फिटको)मुकुट निर्माण गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारीमा छन् । प्रस्तुत छ यसै सेरोफेरोमा उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादितथ अंशः
तपाई एउटा कालिगढ कि व्यापारी ?
म व्यापारी भन्दापनि कालिगढ नै हो । मैले नेपालमा मात्र नभई बिश्वमै प्रख्यात कालिगढ सिद्धिराज शाक्यसँग काम सिकेको हो । वहाँ शान्तिमुर्ति बनाउनेमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै परिचित हुनुहुन्छ । कालिगढ काम गर्दागर्दै मैले साथिहरुसँग मिलेर गोदावरीमा ६० रोपनी जग्गा जोडे । यो जग्गालाई सहि रुपमा प्रयोगमा ल्याउने सोचका साथ काठमाडौंकोे प्रसिद्ध जात्रा ईन्द्रजात्रामा प्रदर्शन गर्ने भैरवको मुकुट स्थापना गरेर पर्यटकीय पार्क बनाउने योजना बनाएको छु । यो मुकुटलाई बिश्वकै ठूलो मुकुट बनाएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने हाम्रो तयारी छ ।
यो कार्य सम्पन्न गर्न तपाईलाई कस -कसको साथ छ ?
यो कार्यमा हाम्रो ललित कलाग्राम समूहले सहयोग गर्ने भएको छ । जस्मा नेपालका कुशल कालिगढहरु राजेश अवाले, राजकुमार शाक्य, त्रिरत्न शाक्य, बव चित्रकार लगायतको सहभागिता रहेको छ ।
मुकुट बनाउने कार्य शुरु भैसकेको छ ?
राजेश अवाले दाईले माटोको नमुना मुकुट बनाईसक्नु भएको छ । यसबीचमा बिनाशकारी भूकम्पले हाम्रो कामलाई प्रभावित पार्यो । यस कार्यमा संलग्न केहि कालिगढहरु पनि भूकम्प पीडित बने । म पनि पिलाछेय टोल (यल) पूननिर्माणमा सहभागि हुनुपर्ने भएकोले यता समय दिन भ्याईन । अव बिस्तारै मुकुट निर्माणमा समय दिन शुरु गरेका छौं । अव छिट्टै यसको निर्माण कार्य शुरु हुनेछ ।
यो कार्यको लागि नेपाल सरकारले पनि तपाईलाई मद्दत गरेको छ ?
हालसम्म कुनै सहयोग गरेको छैन । खासमा हामीहरुले यसको प्रचार नै गरेका छैनौं । नेपाल सरकारसँग पनि सहयोगका लागि कुनै प्रपोजल पेश गरेका छैनौं । मलाई त नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ जस्तो नै लाग्दैन । राम्रो काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकाको चलन नै छैन । बरु उल्टो हामीबाट कर्मचारीहरुले केहि आसा गर्न सक्छन् । कसैले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने कि गुण्डाहरुले दुःख दिन्छन् की नेताका मान्छेहरुले चन्दा मागेर दुःख दिन्छन् । प्रशासनमा गए घुस मागेर हैरान गर्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट के को आशा गर्नु ?
तपाईले किन मुकुटमै लगानी गर्न खोज्नुभएको ?
व्याक्तिगत लाभ मात्र लिन खोजेको भए यहाँ अन्य धेरै ठाँउमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । तर मैले व्याक्तिगत मात्र भन्दानी आफूले गरेको कामले आफ्नो देशलाई पनि केहि योगदान दिन सकु भनेर यो कार्य गर्न खोजेको हो । बिश्वकै ठूलो मुकुट बनाएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सकियो भने बाह्य पर्यटनमा पनि सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । साथै आन्तरीक पर्यटक बृद्धि गर्न सकियो भने त्यसले सबैलाई राम्रो गर्दछ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
मुकुटको डिजाईन कस्ले गरेको हो ?
इन्जिनीयरिङ डिजाईन बाबुराजा महर्जनले गर्नुभएको हो । वहाँ ललितपुर उपमहानगर पालिकाको पनि ईन्जिनीयर हुनुहुन्छ । मुकुट निर्माणको जिम्मा राजकुमार शाक्यले लिनुभएको छ । राजेश अवालेले माटोको जिम्मा लिनुभएको छ । यसको फाईनल जलपको जिम्मा मैले लिएको छु ।
मुकुटमा कुल लगानी कति पर्ने आँकणा निकाल्नुभएको छ ?
मुकुटमा मात्र ३ करोड लगानी हुने भएको छ । ६० रोपनी जग्गामा त पहिल्यै नै लगानी भैसकेको छ ।
तपाईले कालिगढको रुपमा बनाएका कुनै चर्चित संरचनाहरु छन् ?
मेरो नेतृत्वमा चाईनाको छिङ्काई शहरमा एउटा बुद्ध स्तुपा बनेको छ । नेपालका राष्ट्रपतिबाट त्यसको शिलान्यास गर्ने तयारी भैरहेको छ । त्यसमा नेपालीहरुको ५१ प्रतिशत र चाईनिजहरुको ४९ प्रतिशत लगानी भएको छ । यस कार्यमा मलाई बिशेष रुपले सिद्धिदास शाक्यका छोरा न्हुछे रत्न शाक्यले सहयोग गरेका छन् ।